Lahatsoratra | Page 4 of 40 | Fondation des Choisis de Jésus
3B_22: Ry zanaka malalan’ny Foko, izao iainanao ankehitriny izao dia mandalo fotsiny ihany. Tsy misy tokony hataoranao, eo ambanin’ny fiarovako mandrakariva ianao ! Arovako amin’ny Ràko sarobidy ianao. Rakofako amin’ny lambako sy ny an’ny Reniko Masina ianao ! Ankehitriny dia mandalo ny làlam-be izay mitondra anao ho amin’ny hafenon’ny Fitiavana ianao.
2A_36: Ry Bitikako, raha mba fantatrao hatraiza ny hafaliako mahita anao ela ny ela ka nandray ny Fitiavana izay tiako harotsaka ao anaty fonao ! Eny, ry zanako, ianao no tiako, amin’ny ianao izao ! Raiso bebekokoa hatrany ny Fitiavana izay tiako harotsaka ao anaty fonao, avy hatrany ary koa avy amin’ny alalan’ny olon-kafa.
2B_08: Ry zanaky ny Foko, raiso ny Fitiavana izay tian’ny Ray, izay Rainao, Raiko, Raintsika harotsaka ao anatin’ny fonao dia ho feno tanteraka ianao. Misokatra ny lanitra amin’izao fotoana izao, ka ireo izay irian’ny fonao sy takiany dia ho azonao tanteraka.
2B_21: Ry Bitikako malalako, na dia tsy tsapanao mazava aza, dia mitàntana anao eo amin’ny làlan’ny hafenoin’ny Fitiavana Aho. Ny fanaikenao ny Fanahiko no afahako mitàntana anao toy izany.
1A_39: R’ilay Bitikako, te hikikiaka aminao ny Fitiavako Aho. Ekeo fa tiako ianao. Tsy fantatrao ny halehibeazany, ny aavony, ny sakany ary ny alalin’ny Fitiavako. Ny Fitiavako ny tsirairay aminareo Zanako eto an-tany dia tsy manam-petra. Mananaraka azy tsirairay Aho mba hilazako sy mba hatsapany ny Fitiavako.
1A_02: Anaka, fantaro lalandava ao am-ponao ny tsy fahafahanao manao na inona na inona, na dia mahavita zava-mahagaga mahafinaritra amin’ny alalanao aza Aho indraindray. Iray ihany no andraisanao anjara amin’izany dia ny fanomezanao Ahy ny « ENY-NAO ». Raha tiako ampiasaina ianao dia noho ny Fitiavako feno loatra ho anao sy ho an’ireo zanako rehetra ety an-tany. Tiako loatra ianao, ary tiako ho totofana soa avy aty amiko ianao.
2A_09: Ry perla kelin’ny Foko, ny valiteny izay tadiavinao, dia tsy ho hitanao amin’ny toerana hafa afatsy ao anatinao, amin’ny alalan’ireo fotoana maharitra iarahanao lalina Amiko. Tsy ny ataonao no hamalianao ny antsoko fa ny iainanao. Ny tenanao, izay namboarina tamin’ny Fitiavana mba ho tonga « Fitiavana », dia tsy ho tonga amin’ny tanjona farany raha tsy amin’ny alalan’ny Fitiavana.
3A_33: Anaka, tena mandanja foana ny vavaka sy ny fifadian-kanina ! Tokony ho ivon’ny fiainanao ny Eokaristia ! Ny sakramentan’ny fampihavanana dia mitazona anao ao anatin’ny fadiovam-po! Manaraka izany, atodio any amin’ny Ray mandrakariva ny fijerinao, Izy izay ilay Fitiavana ary hitantana anao mankany amin’ilay sivilizasion’ny Fitiavana! Tiako ianao.
3A_19: Ry Bitika malalako, ny manaiky manaraka Ahy, dia manaiky ny ho rantsànana mba ho havaozina araka ny Sitrapon’ny Raiko. Atolory Ahy ny enta-mavesatrao : ho hitanao fa maivana ny jiogako. Aza matahotra. Sambatra ianao nahita sitraka eo imasoko sy arahin’ny Fitiavako mandrakariva.